Diiwaanka Qaamuuska Internetka - 192.168.8.1
Categories Qaamuuska Internetka Leave a comment
Liistada Blacklist / Isticmaalayaasha WiFi - In kasta oo lagu hubinayo xarfaha ama xarfaha ama labadaba, aad ayey suurtogal u tahay sida hadalka in uu helo gelitaanka xafiiskaaga ama shabakadda WiFi guriga. Qariibka digirta, marinka ama deriskaaga, laakiin cid kastoo ay yihiin, waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo helo marka qalab sharci darro ah ama aan la aqoonsaneyn uu ku xiran yahay shabakadaada Wi-Fi ugu dambeyntiina, xaddid soo gelitaankooda iyo xannibaadda.
Markaad badalayso furahaaga router-ka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo xadido helitaanka qalab aan la aqoonsan, waa xoogaa daal & wax soo saar wax soo saar leh. Xaqiiqdii majiraan wax hubin ah in dabagalka uusan 'dillaacin' doonin lambarka sirta ah ee ugu dambeeyay isla markaana uusan dib uheli doonin gelitaanka shabakadaada.
Hoos waxaa ku taxan dhowr hab oo lagu kalsoonaan karo oo lagu ogaan karo & block qof ama aalado shabakadaada Wi-Fi adoon badalin furaha sirta router-kaaga.
1. Shaandhaynta Ciiwaanka Mac-la'aanta ah
Shaandhaynta MAC waxay ka caawisaa ka-xayiridda Isticmaalayaasha WiFi qalabyada aan la oggolaan inay ku xirmaan Wi-Fi-gaaga, shabakadda.MAC Address waa lambar aqoonsi (hardware) ah oo laga helo qalab kasta oo shabakadda ku jira Cinwaanka MAC waxaa loo soo saaray kaar kasta oo shabakad ah & ma jiraan wax 2gadgets ah oo adduunka ka jira oo leh cinwaanka MAC ee la midka ah.
Marka adoo adeegsanaya aaladda cinwaanka MAC, waxaad weligaa toos ugu dalban kartaa routerkaaga inuu oggolaado ama diido soo gelitaanka qalabka ee shabakadda.
Si tan loo sameeyo, soo gal router-ka 'Entry Point control panel'
Hoosta WLAN ama Wireless qaybta konsol-ka, waa inaad eegtaa xulashada shaandhaynta MAC.
Haddii aan hawlgalin, wax ka beddel xaaladda shaandhaynta MAC 'Waa la oggol yahay'
Marka xigta ku dar qalabka liistada MAC Cinwaanka & dooro haddii aad rabto inaad ka noqoto ama u oggolaato soo gelitaankooda shabakadda router-kaaga.
2. Liiska Madow ee Tooska ah
In yar oo ka mid ah router-yada WiFi ayaa macaamiisha u oggolaanaya inay xiraan aaladaha aan la aqoonsan iyagoo ku daraya liiska madoow iyagoo riixaya fure. Tani way ka duwan tahay noocyada router-ka laakiin waxaad badanaa ku dari kartaa aaladda router-gaaga Blacklist ee ka hooseeya qaybta 'Maareynta Qalabka' ee marinkaaga kontoroolka / kontoroolka barta ama wixii weligiis ah ee taxan dhammaan qalabka ku xiran router-kaaga. Halkaas waxaad ka heli doontaa furaha macmiilka “block” ama wax isku mid ah.
Haddii aad raadineyso qaab gaar ah oo qarsoodi ah oo ka fudud xannibo qalabka aan la aqoonsan ka shabakadaada WiFi, waxaa jira aaladaha shabakad dhinac saddexaad oo hufan oo aad ku xiri karto qalabkaaga si aad u gasho gudiga xakamaynta router. Tusaale ahaan FING, waa loo heli karaa macruufka & aaladaha Android & waxay kuu dhiibaysaa xulashooyinka xulashooyinka xakamaynta ah si loogu oggolaado kuwa isticmaala inay:
Ka jooji joornaalada & aaladaha aan la aqoonsan, xitaa horey waxay ugu xirmaan shabakadaada
Waxay kuu direysaa digniin haddii qalab cusub uu ku jiro shabakaddaada; si fudud loogu fiirsado ku xadgudbayaasha (yada)
Ku eeg liistada qalab / qalab gooni ah shabakaddaada
Hel helitaanka qalabka saxda ah ee cinwaanka IP, moodeelka, cinwaanka MAC, magaca qalabka, iibiyaha & soo saaraha.
Ku hel digniinta qalabka & amniga shabakadda iimaylkaaga & taleefoonkaaga
Iyadoo aan loo eegin sida qalabku ugu xiran yahay shabakadda WiFi, waxaad ku xiri kartaa mid ka mid ah 3-da dariiqo ee kor ku xusan adigoon wax ka beddelin lambarkaaga sirta ah.